ရှုခင်းမြက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China Landscape Grass စက်ရုံ
စူပါမားကတ်များအတွက် DIY ရှုခင်းမြက်
chaim DIY စတိုးဆိုင်များအတွက်ရှုခင်းမြက်
Landscape Grass အတွက်ကိုးကားချက်များ
chaim / DIY စတိုးဆိုင်များအတွက်ကိုးကား
Playgro အတွက်ရှုခင်းမြက်ခင်း ...
ဂေါက်သီး - ၈၆ အတွက်အခင်းအကျင်းမြက်ခင်း
ဂေါက်သီး - ၃၄ အတွက်အခင်းအကျင်းမြက်ခင်း
ဥယျာဉ် -326 များအတွက်ရှုခင်းမြက်
အရွယ်အစား: 30cmx30cm Turf သည် 100% anti-aging နှင့် UV 2.Turf base သည် 100% anti-aging နှင့် UV 3.The သိပ်သည်းဆ, gauge, ချုပ်နှုန်းကိုလိုအပ်ချက်များကိုအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကုန်ကျစရိတ်ကဒီထက်နည်းနိုင်တယ်။ ၄။ ဖိုင်ဘာ / ကြိုး၏အထူနှင့်အကျယ်ကိုလိုအပ်ချက်အရချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပိုနည်းနိုင်သည်။ 5. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောသတ္တုမပါဝင်သည်။ လူ့မြေဆီလွှာနှင့်မြေအောက်ရေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ အပူ၊ အအေးခံလျှပ်စစ်နှင့်ဆူညံသံများကိုတည်ရှိသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် 111 အခင်းအကျင်းမြက်
မြို့တော်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးTHEရိယာသည်မြို့တော်ကိုစိမ်းလန်းစေသည်။ Wanhe Grass ရှုခင်းသည်မြို့နှင့်စီးပွားဖြစ်areaရိယာအတွက်ဖြစ်ပြီးမြို့ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးနီးပါးအတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတို့အတွက်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနေရာများတည်ဆောက်ရန်ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မြို့နှင့်စီးပွားဖြစ်forရိယာများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်းသည်သဘာဝမြက်ပင်များထက်ဆောက်လုပ်ခြင်းကာလတိုတောင်းသည်။ ရုပ်ပုံများအရသို့မဟုတ်သီးခြားပြုလုပ်ထားသည့်အတိုင်း PE + PP အရောင် ...
စီးပွားဖြစ် -321W အတွက် Landscape Grass
စီးပွားဖြစ် -344 များအတွက်ရှုခင်းမြက်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် -90E အတွက်ရှုခင်းမြက်
ဥယျာဉ် -302 များအတွက်ရှုခင်းမြက်
ဥယျာဉ်မှူးသည်အလုပ်မကျန်တော့ပါ။ သငျသညျ sod mowing ပင်ပန်းနေဆဲလော မြက်ရေလောင်းခြင်းကြောင့်မတတ်နိုင်သောငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်ကြောက်နေပါသလား။ နေရာတကာမှာမလွှဲမရှောင်ပြောင်သောအစက်အပြောက်များရှိသည့်အစက်အပြောက်ဥယျာဉ်ကိုသင်ရှက်နေသလား။ Wanhe Grass သည်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ပြandနာများနှင့်စိုးရိမ်မှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ရုပ်ပုံများ (သို့) စိတ်ကြိုက်ပုံအမြင့် ၅ မီလီမီတာမှ ၅၀ မီလီမီတာ (သို့) စိတ်ကြိုက်အပ်ချုပ်ထားသောကြိုးအမျိုးအစားများအရပစ္စည်း PE + PP အရောင် Density 12600m2 (သို့) စိတ်ကြိုက်အပ်ချုပ်ထားသောအပ်ချုပ်ပစ္စည်းများ၊ ...
ဥယျာဉ် -304 များအတွက်ရှုခင်းမြက်
ရုပ်ပုံများ (သို့) စိတ်ကြိုက်ပုံအမြင့် ၅ မီလီမီတာမှ ၅၀ မီလီမီတာ (သို့) စိတ်ကြိုက်အပ်ချုပ်ထားသောကြိုးအမျိုးအစားများအရပစ္စည်း PE + PP အရောင် Density 12600m2 (သို့) စိတ်ကြိုက်အပ်ချုပ်ထားသောအပ်ချုပ်ပစ္စည်းများ၊ PE အထုပ်အရွယ်အစား ၂ * ၂၅ မီတာ (သို့) တစ်အိတ်လျှင် ၄ * ၂၅ မီတာ (သို့) စိတ်ကြိုက်မူလတန်းကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော PP + ယက်ခြင်း၊ PP အသားတင်အမြင့် ၃၀ မီလီမီတာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အုတ်မြစ်ချခြင်း ၁.၃ SBR Latex / PU ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောရေနုတ်မြောင်းပုံစံဒီဇိုင်းယိုစိမ့်အပေါက်အနံ ၂ / ၄ မီတာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်လှိမ့အရှည် ၂၅ မီတာ or Customi ...
ဥယျာဉ်မှူးသည်အလုပ်မကျန်တော့ပါ။ သငျသညျ sod mowing ပင်ပန်းနေဆဲလော မြက်ရေလောင်းခြင်းကြောင့်မတတ်နိုင်သောငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်ကြောက်နေပါသလား။ နေရာတကာမှာမလွှဲမရှောင်ပြောင်သောအစက်အပြောက်များရှိသည့်အစက်အပြောက်ဥယျာဉ်ကိုသင်ရှက်နေသလား။ Wanhe Grass သည်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ပြandနာများနှင့်စိုးရိမ်မှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ရုပ်ပုံများ (သို့) စိတ်ကြိုက်ပုံအမြင့် ၅ မီလီမီတာမှ ၅၀ မီလီမီတာ (သို့) စိတ်ကြိုက်အပ်ချုပ်ထားသောကြိုးအမျိုးအစားများအရပစ္စည်း PE + PP အရောင်များ။
နောက်ကွယ်၌စိမ်းလန်းသောရှိသည်ဖို့ GOLF အချိန်! ဂေါက်သီးကစားခြင်းအတွက် Wanhe Grass ရှုခင်းကိုအစစ်အမှန်အစိမ်းရောင်အတွေ့အကြုံနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးထုတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့်မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောချောချောမွေ့မွေ့သည်တိကျသောဘောလုံးလိပ်ကိုအာမခံပေးပြီး၎င်းကိုကစားနေစဉ်ကြည်နူးဖွယ်နှစ်သိမ့်မှုပေးသည်။ ယခုသင်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းသာဝေးအလေ့အကျင့်areaရိယာရှိနိုင်ပါသည်! ၎င်းသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ပျော်စရာနေရာဖြစ်နိုင်သည်။ P PE နှုန်းအရပစ္စည်း PE + PP အရောင် ...
ကစားကွင်း -90E4 အတွက်ရှုခင်းမြက်
PLAYGROUND အိုင်တီအပေါ် PLAY နှင့်ပျော်စရာရှိသည်! Wanhe Grass ရှုခင်းများအတွက်ကစားကွင်းသည်ကလေးများ၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ပုံပန်းသဏ္loveာန်ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးသောကလေးများအတွက်ပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုခဲသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများမပါရှိသောတင်းကြပ်သောလုံခြုံမှုစံနှုန်းများ (DIN, Reach, RoHS, etc) အရထုတ်လုပ်သည်။ သင်၏ကလေးများသည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများမပြုလုပ်ဘဲ၎င်းကိုကစားနိုင်သည်။ အရောင်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုကြောင့်အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းဇုန်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းဘုတ်များဖန်တီးနိုင်သည်။
ကစားကွင်း -၁၁ အတွက်ရှုခင်းမြက်ခင်း
Astro Turf ဘောလုံးကွင်း, ဘောလုံး Turf Grass, အတုမြက်ကော်ဇော, အတုဂေါက်သီးမြက်, အတုမြက်ခင်း, Landscaping များအတွက် Landscaping မြက်,